YEZHOVIK MUSHROOM: SHARAXAAD IYO SAWIR, QAYBINTA, NOOCYADA LA CUNI KARO IYO KUWA AAN LA KARIN, FURSADAHA CUNTO KARINTA - SOOSAARKA DALAGGA
Maqaar yar oo loo yaqaan 'urchin': meesha uu ku baxo oo la cuni karaa?
Ezhovikami ama madow waa la yiraahdaa boqoshaada, kuwaas oo horay loo sheegay qoyska Gidnum, maantana waxay ka tirsan yihiin qoysas kala duwan. Waxaa jira noocyo badan oo qoyan. On ugu caansan ayaa lagu falanqeyn doonaa maqaalkeenna.
Edibles ma la cunaa?
Dhamaan noocyada shimbiraha oo dhan ma ahan mid xiiso leh dadka soo iibsada. Waxaa ka mid ah noocyo badan oo ay jiraan wax la cuni karo, xaalad ahaan la cuni karo oo aan la karin. Kama jiraan waxyaabo sun ah. Dhadhanka dhammaan ezhovikov ma aha mid aad u sarreeya. Si ay u dhadhamiyaan, waxay yihiin qaar si qaddar ah loo yaqaan boqoshaada ama canjeelada. Boqolaalkani waxaa ugu wanaagsan in la cuno da 'yar.
Noocyada boqoshaada iyo sharaxaadda
Akhri sharaxaadda iyo sawirada noocyada kala duwan ee buugga sannadka, iyo sidoo kale talooyinka loogu talagalay isticmaalka.
La kulan noocyada la cuni karo ee boqoshaada.
La cuni karo
Ka mid ah la cuni karo ugu caansan waa lix nooc. Hoos waxaa ku qoran sharaxaad kooban. Alpine. Mushaaro noocan oo kale ah waxay gaartaa qiyaasta 5 illaa 30 cm, laakiin waa ay soo ifbaxayaan, si kastaba ha noqotee, way madoobaan oo waxay helaan soodh wasakh leh. Waxay yihiin dad badan oo lugood leh oo leh dhirbaaxo ah qaabka koonaha 2 cm dheer, oo ku dulsaaray asalka hooseeya. Caadi ahaan, wakiillada noocyada alpini waxay ku nool yihiin firfircoonida, laakiin waxay la wadaagi karaan kuwa kale. Inta badan waxay ku soo wada dhacaan meelaha roobaadka laga bilaabo bartam-xagaaga illaa badhtamaha. White Cagaarshowga cad ayaa badanaa ku wareersan noocyo kale - qashinka huruuda ah, tan iyo markii ay u egtahay nuqul yar, oo leh cad ama cad cad. Waxay leedahay dhexroorka 5 ilaa 12 cm. Dhinacyada dhalinyarada ah waa wax yar oo isku dhafan, iyadoo dhinacyadu hoos u dhacayaan. Da 'da da' weyn waxay u rogeysaa sujiye qoto dheer oo dhexdhexaad ah. Qeybta hoose waa noocyo gaaban oo cad ama midab casaan leh.
Waxay ku yimaadaan lugta oo gaarta dhererka 6 cm iyo ballac ah 3 cm. Jidhku waa caddaan, oo kufilan dhadhanka iyo urta, wuxuu leeyahay qoraalo miro ah. Way adag tahay marka loo eego ciriiriga huruuda ah. Waxay muuqataa dhammaan noocyada kaymaha ee Waqooyiga Ameerika, Eurasia. Foomamka maadada mycorrhiza oo leh dhuumo. Waxay ku koraan oo kaliya on carradu miro, ku haboon karkaraya, saliid, salting, qalajinta. Isku dar Wakiil ka mid ah noocyada noocan oo kale ah ayaa leh muuqaal xiiso leh, taas oo ay ugu wacan tahay taas oo aan lagu jahli karaynin wax kale oo ah musqulaha - jirka miro ayaa loo aasaasay sidii lakabyo hoos u dhac ah ilaa 25 cm oo dheer oo ah beige, kareem, jaalle, midab cad. Miisaankoodu wuxuu gaaraa laba kiilo. Qaabku waa wareegsan yahay ama khaldan yahay. Jidhku waa cadad, rinji cad. Mushroom inta lagu jiro "dabeecadaha aamusan" waxay ku dhacdaa marar dhif ah. Waxaa lagu arki karaa gooyooyinka dhirta, khaladaadka Crimean, Bariga Faro iyo Shiinaha. Waqtiga muuqaalka - dhammaadka dayrta xagaaga-dhexe. Sababtoo ah muuqaalka asalka ah, waxa uu leeyahay magacyo kale - libaaxa lafaha, madaxa daanjoogta, boodhka miro, gawska gadhka. Waxaa loo isticmaalaa daawada dhaqanka ee Shiinaha si loo xoojiyo nidaamka difaaca jirka iyo daaweynta cudurrada mareenka caloosha iyo sidoo kale antiseptic. Tani waa mid ka mid ah wakiilada ugu macquulsan ezhovikov. Dhadinteeda waxay u egtahay mid la mid ah hilibka shimbiraha ama qolofta. In warshadaha cuntada waxaa loo isticmaalaa sida wakiil ah dhadhan.
Ma taqaanaa? Khabiiradu si joogta ah ayey u sameeyaan daraasad ficilka antitumor ee shanlaha budada. Dalka Ruushka, shaqaalaha Machadka Cilmi baarista ee Antibiyootigyada Cusub. GF Gauze RAMS iyo Machadka Khubarada Dabiiciga ah. N. D. Zelinsky. Tijaabooyin tijaabo ah oo jadeecada shaybaarka ah ayaa cadeeyay in soosaarista aqueous ee fungus ay horjoogsan kartaa kobaca burooyinka iyo sii dheer nolosha nolosha.
Yellow Wakiilka ugu caansan ezhovikovyh. Waxay leedahay dabool ah 4 illaa 15 cm dhexdhexaad ah. Da'da yar, waxaa lagu rifey midabada cas ee casaan ama orange. Baalasha - waxay noqonaysaa mid madow. Marka ugu horeysa waa wadajir, iyo dhamaadka nolosha waxay kuxirantahay geesaha hoose. Dhinaca gudaha waxaa lagu daboolaa lafdhabarta. Qalabka silsilad huruud ah oo qaab ah silsilad, dherer 2 ilaa 8 cm, siman, jaale ah. Jidhku si adag ayuu u burburiyaa. Xannuunsan yahay midab huruud ah. On dhadhan - iyada oo qoraal ah miro. Tirooyinka hore, qashirku waa adag yahay, qadhaadh. Waxay ku koraysaa qaaradda Eurasian iyo dalalka Waqooyiga Ameerika. Laga soo bilaabo bartamihii Juun ilaa dhammaadka Oktoobar. Miraha ka hor bilawga ah ee dhaxan ugu horeysay. Isku soo ururiya ujeedada cunidda ee la shiilay, la kariyey, iyo cusbada. Gaar ahaan qadarin Faransiiska. Wuxuu u baahan yahay pre-soaking si loo baabi'iyo dhadhanka qadhaadh. Sidoo kale waa suurad wacan ka hor intaan la karinin si aad uga takhalustid basbaaska.
Fitamiin badan oo naftooda ah ayaa leh boqoshaada kobcaya.
Coral-sida. Jidhka miro ee noocyada noocan oo kale ah waxay u egyihiin muuqaalka laanta geedka. Waxay leedahay laan cad oo badan. Jidhka wakiillada da'yarta ee noocyada kala duwan waa caddaan. Isla markii uu fangasku noqdo mid qaangaadh ah, wuxuu noqdaa jaalle. Waxay ku koraan geedaha dhintay. Mushinka waxaa loo arkaa mid la cuni karo, laakiin ururintiisa ayaa la mamnuucay sababtoo ah xaaladdeeda ilaalinta - waxaa lagu diiwaan geliyaa Buugga Cas ee Ruush sida noocyo dhif ah. Antenna. Noocyada fangasku waxay ku dhalaaleen meydad miro ah oo midab cad ama casaan ah, da 'da' da 'ah, oo hurdi ah, oo leh jeexan ama cirif leh, mararka qaarkoodna fareemo. Qalab, dheer (ilaa illaa 1 cm) oo ah midabyo caddaan ah ayaa lagu dhejiyaa qaybta sare, iyagoo helaya midab madow sida ay qaangaadhayaan. Jirka waa caddaan ama casaan, jilicsan. Cuntada waxaa loo isticmaali karaa oo keliya shaybaarka dhalinyarada. In boqoshaadii jir ah, waa adag yahay, dhadhan. Antenna ayaa si ballaaran loogu soo bandhigay qaybta dhexe ee waqooyiga. Waxay muuqataa July, waxay dhamaataa fruiting horaantii dayrta.
Caadi ahaan la cuno
Inta badan wakiilada Yezhovikov waxay u dhigmaan boqollaal shimbir ah oo aan la dabooli karin ama aan la dabooli karin.
Midab casaan. Kala duwanaantani waxay leedahay dabool ah casaan-casaan oo qaabdhismeed aan caadi ahayn oo leh geeso lakab ah. Dhinaca hoose waxaa jira waxyaabo badan oo lafdhabar u ah lugta lugta ee papillae. Lugta waa mid weyn oo cufan, midab huruud ah. Jidhku waa dihin. Waxay leedahay midab kareem ah. Marka isku ururin liinta. Miraha mushaharka xilliga dayrta. Waxaa laga helaa kaymaha isku dhafan iyo qulqulaya. Motley Buunshuhu waa mid kala duwani ama dhoobo leh, xajin, wuxuu leeyahay koofida midabka cawl ama midab leh oo leh miisaanno mugdi ah oo lagu diyaariyey goobo. Da'da yar, qaabkeedu wuxuu ku yaallaa geesaha kore, baaluqa, wuxuu isu rogaa guntin ama jilicsan oo leh geeso cirif leh. Lugta noocan ahi waxay gaartaa 6-8 cm oo dherer ah. Waa dhumuc, siman, wax yar oo qalafsan, oo ah qaab ah silsilad, dhererka dhinaca hoose. Midabku wuxuu udhaxeeyaa koofida - brown ama cawl. Jirka waa caddaan ama cawl, casiir leh, oo leh ur aan fiicnayn. Wakiiladii hore waxay isku dhejiyeen kallana. Xilliga dhacdooyinka wakiilada noocyada noocan ah - dhammaadka dayrta xagaaga-dhexe. Waxay ku koraan Eurasia, meelaha leh xaalado cimilada dhexdhexaad ah. Hedgehog motley wuxuu ku jiraa boqoshaada tayada hooseeya. Laguma talinayo in la isticmaalo iyadoon daaweyn kuleyl, gaar ahaan cirbadda cagaarka - sumawga ayaa suurtogal ah. Da'da yar, fangaska waxaa loo isticmaali karaa salting ama sida dhir udeynta kaddib marka la kariyo 8-10 daqiiqadood.
Ma taqaanaa? Noorwiijiyeyaashu waxay isticmaalaan tijaabooyinka hore ee midabka midabada leh si ay u helaan rinji-buluug-cagaaran si ay u dheehdo dhogorta idaha.
Psevdoezhovik gelatinous. Magaca kale ee noocyadani waa fungus baraf. Koofiyaddiisu waxay u egtahay taageere ama carrab leh geeso cirif leh. Wuxuu kor udhigaa dhexdhexaad ah 7.5 cm, Spines wuxuu ku yaalaa qaybta hoose. Qaybta kore waxaa lagu rinjiyeeyaa cadaanyo, muraayado madow. Markay qaangaar tahay, waxay noqotaa madow. Lugta ayaa leh dherer 5 cm, si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaanay noqon. Qashirku waa jilciye, wareegsan. Waxay leedahay ur aan caadi aheyn oo dhadhankiisa. Waxaa laga helay saddex qaaradood - Eurasian, North American, Australian.
Uma maleyn karo
Meelo badan ayaa sheega in dhammaan noocyada shimbiraha aysan khatar u ahayn bani-aadamka aynana ku jirin sunta. Waxaa loo tixgeliyaa in aan la dabooli karin sababtoo ah dhadhan la'aanta ama dhadhanka qadhaadh, iyo sidoo kale ari aan fiicnayn. Noocyada caan ah ee ezhovikov wax ka badan kuwa kuwa la cuni karo.
Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la barto sida loo kala saaro cagaar cagaaran iyo boqoshaada sunta leh oo ku koraya geedaha, mawjadaha la cuni karo iyo boletus.
Xadhig. Kalluumaysigu ma aha booqde joogta ah ee kaymaha isku dhafan ee Bariga Faro iyo Siberia; waa noocyo dhif ah. In muuqaalka waa mid aad u xusuusta laba sano qalajin. Isagu waa casaan-cawlan oo leh furfurnaan fudud oo weyn oo cabbiraya 10 cm dhexroor. Lugta guduudan, dhuuban. Miraha xilliga dayrta hore. Cunno aan ku habbooneyn. Finnish. Noocyadaasi waxay ka yimaadaan indhaheeda oo ah kuwa soo-goysyada oo aad u dhif ah. Koofiyaddiisu waxay kor ugu kacdaa illaa 15 cm wareegaan. Wakiilo dhallinyaro ah, waa jaangooyo, qaab aan caadi ahayn, wakiillada hore waxay u sujuudayaan. Buuxiyey tones brown. Qeybta hoose waxaa ku jira qanjirro cufan oo ah 0.3-0.5cm dhererka, Lugta waa gaaban ilaa 5 cm oo dherer ah. Qeybta hoose waxay noqotaa mar hore. Waxay ku dhacdaa midabyo kala duwan. Saxarka cufan wuxuu ufudusaa wanaagsan, laakiin dhadhanka waa mid aad u xun, oo dhadhan qadhaadh leh. Duufaantanu waxay ku nool yihiin kaymaha isku dhafan iyo isku dhafan bilawga xilliga dayrta. Madow Wakiilkani waa ezhovikov la heli karaa oo laga heli karaa geed iyo geedo isku jira laga bilaabo bartamihii xagaaga ilaa dhammaadka Oktoobar, laakiin aad u yar. Dhexdhexaad ah oo gaaraya 3-8 cm. Isla markiiba muuqaalka ka dib, wuxuu leeyahay midab buluug ah oo casaan ah, wuxuu koraa kordhay sidii uu u weynaado, oo uu madow ku dhaco dhamaadka noloshiisa. Koofiyadu waxay la midoobaan lugta dheer iyo gaaban ee madow. Jirka ayaa adag, sidoo kale madow. Hymenophore spiky buluug, ka dibna cawl. Grungy. Noocyadaas ayaa sidoo kale loo yaqaannaa wasakh, qallafsan. Waxay magaceeda u keentay qaab dhismeedka qanjirrada leh xuubka iyo xajmiga miisaanka korkiisa, sababtoo ah waxay u muuqataa in uu dillaacsan yahay oo aan cidna lahayn. Gogol-gaaban oo ka soo jeeda hoose ee guntinjeerka ayaa ka imanaya lugta. Koofiyadu waxay leedahay qaab aan caadi ahayn oo leh jajab saarid. Dusha sare waa miisaan dabaq ah oo ku yaala bartamaha, oo ku rinjirta midabada cawliga, miisaanka - bunni madow. Lugta oo qaab ah silsilad, dhirta hooseysa. Saldhigiisu waa mid buluug ah ama cagaar ah. Dusha oo dhan waa la jilicsan yahay qolfaha casaan. Saxarka ee fangaska waa qadhaadh leh dhadhan qaas ah. Waxay leedahay midab cad oo leh casaan casaan. Suufka caajisku wuxuu ku koraa xayawaan dhexda dhirta iyo dhirta yaryar laga bilaabo bartam-xagaaga illaa badhtamaha-badhtamaha.
Sidoo kale akhri qooyska fangaska - rusiya.
Klimakodon qurux badan. Mushaharka waxaa lagu aqoonsan karaa dabaq kabaaban ama kabaan. Foomka, waxay noqon kartaa qaab qaab wareeg ah ama fan ah. Midabka - caddaan, bunni, oranji. Spines ku yaalla 0.8 cm dheer oo qaybta hoose. Waxay yihiin caddaan ama midab leh. Klimakodon ma laha lugaha. Jirka waa caddaan, xajmiga. Nadwadeeda iyo urta way ka maqantahay. Badanaa, noocyada noocan ahi waxay kudhisan yihiin kulaylaha iyo subtropics geedo qalalan ama geedo dhintay. Klimakodon waqooyiga. Miisaanka si fudud loo aqoonsan karo, maaddaama ay ku koraan hab aan caadi ahayn - Taarbo dhowr ah oo qaab ah oo ah qaababka ama afafku waxay ku koraan saldhiga waxaana ku yaal mid ka sareeya kan kale. Gub walba wuxuu ku koraa dhexroor 10 illaa 30 cm, geesahoodu waa la jeexjeexay. Mushrooms waxay ku kori kartaa isla markaana gaari kartaa tiro dhan 30 kg. Jidhku waa mid adag, adag, barxadda, oo leh caraf udgoon. Hymenophore spolicy. Xoqin ilaa 2 cm dheer. Waxay ku koraan dalagyada daciifka ah. Miraha bartamaha xagaaga. Kobcinta wada jirka (felodon). Mushahani waxay ku sameeyaan dabool leh dhexroor 4 cm oo midab madow ah oo qaab aan caadi ahayn. Spines oo midab cad ah ayaa laga sameeyay qeybta hoose. Koofiyadu waxaa la dhigayaa lugta gaaban oo khafiif ah oo leh madow. Waxay ka koraysaa xagaaga dambe ilaa dhaxanta ugu horreysa ee carrada ciidda ah ee kaymaha caleemaha iyo kaymaha isku dhafan.
Halkee laga raadiyaa dabeysha: ecology iyo qaybinta
Qeybinta qaybinta Ezhovikov waa Eurasia, Waqooyiga Ameerika, Australia, inta badan degaannada leh xaaladaha cimilada dhexdhexaad ah, laakiin sidoo kale gobollada qaboobaha, sida Bariga Bariga, Siberia, Ural. Badanaa waxay doortaan carrada ciidda ee kaymaha iyo isku dhafka isku dhafan, daboolka cawska iyo xoqan ee fruiting. Ku dhowaad dhammaan qashinka waxay sameeyaan mycorrhiza oo leh dharbaaxo, sidaa daraadeed inta badan waxaa laga heli karaa hudheelka, xoqan, iyo sidoo kale laga helo geedo cagaar ah.
Baro sida loo qallajiyo boqoshaada lohodheer, roodhida saliidda, boqoshaada barafka, boqoshaada duurjoogta ah, jaantuska, boqoshaada lohodka iyo boqoshaada cad.
Noocyada qaarkood waxay ku degaan on hore, geedaha dhintay, jirridda. Waxay ku kobcin karaan labada qof iyo kooxaha. Marka la isku duubo, xuduudahoodu waxay ku dhow yihiin hal mar, mararka qaarkood waxay sameeyaan "wareegyada wareegyada". Wakhtiga khudradda ayaa bilaabmaysa bilawga xagaaga waxayna socotaa illaa badhtamaha-bisha. Qaabilaadda dadku waxay dhacdaa bisha Agoosto ilaa horraantii Sebtembar.
Miyuu suurtagal yahay iyo sida loo koro boqoshaada dalka?
Kalluunka beeraha waxaa lagu kori karaa xaaladaha dalka. Qoryaha geedo leh dhirta waxaa laga iibsan karaa dukaamada leh alaabooyinka beerta. Hawada furan, boqoshaada waxaa la beeray laga bilaabo Abriil ilaa Oktoobar, gudaha, wakhti kasta oo sanadka ah. Waxay ku ciriiri jireen qoryo, tusaale ahaan, calaamadaha cusub ee la tuuray caleemaha. Waa inay ahaadaan 15-20 cm dhexroor iyo 1 m dheer. Ka hor inta aan la saarin ulaha maqaarka, qoryaha waa in lagu qooyay biyo iyo dhoobo dusha iyaga oo dhererkoodu yahay 4 cm iyo dhexdhexaad ah oo ah 0.8 cm 10 cm kasta. Waxay u baahan doonaan in la mariyo laba jeer ama saddex jeer toddoba maalmood.
Waa muhiim! Waxaa lagama maarmaan ah in la shaqeeyo ulaha lakabyada leh gacmo si fiican loo nadiifiyo ama gacmo gashi la ilaaliyo.
Ku iftiinka iftiinka qoraxda ka dib marka la arko mycelium. Goynta waa in la filaa lix bilood ka dib. Xilliga jiilalka qorraxdu waxay u baahan doontaa inay hoy ku sameeyaan. Maydhidda miraha waa in la gooyaa da'da yar.
Xeerarka kaydinta ezhovikov
Kalluunka ayaa lagu kaydin karaa qaboojiyaha. Si kastaba ha noqotee, ma aha mid aad u dheer - ilaa saddex maalmood, ayadoo ay ugu wacan tahay muuqaalka adag iyo qadhaadh. Iyadoo aan qaboojiye, waxay isticmaali karaan kaliya laba illaa saddex saacadood, ka dibna noqo madow. Ka hor inta aan la dhigin kaydinta, waa in la dhaqo, qooyay biyo cusbayn, qalajiyey. Ku kaydi bac si adag u xiran. Kalluunku wuxuu ku habboon yahay qalajinta, laakiin habkan ilaalinta, waxay noqdaan kuwo adag. Boqoshaada la qalajiyey waxaa loo isticmaalaa saldhigga maraqa, maraqa, dharka, suugada, saliida.
Aad ayay faa'iido u leedahay in ay cunaan boqoshaada sida: doofaarka, jilibka, boletus, boletus iyo champignons.
Nafaqadoodu waa laba ilaa saddex sano. Ka hor inta qalajinta, boqoshaada aan la maydhin, laakiin kaliya oo nadiif ah oo tirtiray qalalan qallalan. Ka dibna jarjar tuubbo dhuuban 0.5 cm, waxay ku qoran yihiin xaashida dubista, daboolay xayawaanka, si aysan isu taaban midba midka kale. Kadibna waxaa la dhigaa foorno, preheated ilaa 45 digrii. Ka dib markii taargooyadu si fudud wax loo qalajiyo oo si sahal ah u jeexjeexi kara xayawaanka, heerkulka ayaa la kiciyaa ilaa 70 darajo. Qalitaanka waxaa lagu sameeyaa foorno yar oo furan. U qaado marxalado dhowr ah laba maalmood gudahood. Musqulaha la diyaariyay waa in la qallajiyaa, laakiin ma jebin. Mushrooms sidoo kale waa la kariyaa. Si arrintan loo sameeyo, waa in la xalliyaa, la nadiifiyaa oo lagu qooyay salineeska saddex ilaa afar saacadood. Ka dibna waa in la googooyaa qeybo ah 4-6 cm. Hal kiilo oo boqosha ah waxaad u baahan doontaa 40-50 g oo cusbo, dill, basal, toon, malayga. Gobolladu waxay u baahan yihiin in la kariyo ilaa la diyaariyo biyo cusbaynaya, maydhin oo la dhigo suunka. Daadi xawaashka iyo cusbada, ku rid weel, oo hoos u cadaadiya. Badeecada waa in loo diraa meel qabow lix ilaa sideed maalmood. Ka dib markaa, boqoshaada waxaa loo isticmaali karaa qaadashada, maraqa cuntada iyo suxuunta waaweyn. Habka ugu fiican ee lagu kaydiyo waa in la qaboojiyo boqoshaada cusub. Heerkulka -12 digriga noloshooda shelf waa saddex bilood, oo leh -18-lix - lix bilood, oo leh -25-ti - sanad.
Sidee loo kariyaa qashinka
Marka la karinayo ezhoviki waxaa loo isticmaalaa si aan macquul ahayn. Ma in Faransiisku iyaga u diyaariyaan noocyo kala duwan oo suxuun leh oo ka mid ah boqoshaada ugu wanaagsan. Qaybta kalooriga ee sheyga waa mid hooseeya - 100 garaam ayaa ku jira 30 kcal. Sida qiimaha nafaqada, markaa waxaa jira 3.7 garaam oo borotiin ah, 1.7 grams oo dufan ah iyo 1.1 garaam oo carbohydrates ah.
Waa muhiim! Maadaama urchins ay soo uruuriso walxo waxyeello ka soo jeeda deegaannada miro-dhirta, lakabka kaliya ee lagu ururiyo aagagga ecologically nadiifka waa in la cunaa.
Waxaa jira dhowr talooyin ku saabsan sida loo kariyo ezhoviki. Marka, ka hor inta aanad karin, hubi inaad ka saarto lafdhabarta. Waxaa jira qaar ka mid ah tijaabooyinka u baahan karkarinta qasabka ah si looga saaro qadhaadh. Noocyo isku mid ah sida shanlada, antennae, raaxo, uma baahna karkaraya. Waxay isla markiiba isku shiishi karaan ama saliid.
Si ay u fuliyaan khudradda boqoshaada, waa in la maydiyaa oo laga saaraa hadhaaga mycelium ah. Noocyadaas u baahan in la daaweeyo waa in la kariyaa ama la qooyay. Mushrooms gooyay. Ka dibna ku shub saliida qudaarta lakabka digada la shiilay iyo ku dheji ezhoviki. Korniinka waa in lagu sameeyaa kulaylka yar. Когда грибы станут немного мягкими, нужно добавить к ним порезанный тонкими кольцами либо полукольцами лук и посолить.
Если во время жарки испарился весь сок, следует накрыть сковороду крышкой. Грибы считаются приготовленными, когда они потемнели, издают приятный аромат и стали мягкими. Чтобы добавить пикантности и сделать их еще более мягкими, за пару минут до готовности необходимо добавить сметану. Ее нужно поместить лишь на поверхность грибов, дна она касаться не должна. By habka, ka duwan likaha kale, waxaa jira noocyo of urchin in inta lagu guda jiro frying ma hoos u size size.
Ka hor inta aanad karin boqoshaada, ka saar haraadiga ah ee carrada, dhirta laga soo miiro miro. Waxa lagu dhaqaa biyo socda. Ku rid biyo qabow, isku karkari oo isku kari ilaa 15-20 daqiiqo. Wixii maraq, waxaa lagu talinayaa in ay isticmaalaan boqoshaada kala duwan, saxan ma noqon doono mid aad u carafo leh oo qoyan. Hedgehog - mushroom aan ka mid ahayn kuwa soo iibsada.
Baro boqoshaada sida: cadaannada cad, cawska, xoqan, xoqan, shimbirta, jilicsanaanta iyo carafka madow.
Badanaa looma qaadin sababtoo ah waxay tixgeliyaan in aan la dabooli karin, ama aysan rabin in ay nacas la 'basbaaska, taas oo ka dhigaysa wasaqda suunka iyo boqoshaada kale waddada. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah noocyada noocaas ah waxaa loo isticmaalaa shiil, karkaraya iyo salting. The ugu delicious yihiin huruud ah, cad iyo shanlada ezhoviki. Mushrooms waxaa loo isticmaalaa in lagu karsado oo keliya da 'yar, maxaa yeelay tijaabada hore waxay u egtahay in ay dhadhanayaan oo ay leeyihiin hilib adag. Noocyada qaar ayaa ku habboon in ay sii kordhaan xaaladaha dalka.
Maanta wakhtiga afraad mar kasta waxaan ku dul tuntay budo. Mid ka mid ah geedo waaweyn, oo horeyba u bilaabay inay huruud noqdaan, iyo dhowr geedo yar yar ayaa koray barafka leexay.
Dadka musaacdani waxaa loo yaqaanaa waqti aad u dheer, sida caddaynaya tiro badan oo magacyo caan ah: digaag, qoryaha, foostada, feerafiyaha, qolofta, kolchak ee Russia, elk, ariga, rogula ee Belarus iyo Ukraine. Cabbirka cabbirka laga bilaabo dhexdhexaad ilaa aad u ballaaran. Mararka qaarkood waxay noqon kartaa ilaa 30 cm dhexroor, flat, oo leh nasasho yaryar oo ku taal bartamaha, kaas oo sii xoojiya koritaanka fungus, oo u eg hindhis. Daboolka boqoshaada qaan gaadhka ah waxay leedahay gees weyn oo lafdhabar u ah, kuwaas oo sanado qalalan laga yaabo inay jabiyaan dhinacyada. Boqollaal dhalinyaro ah ayaa laga yaabaa inay yeeshaan fur yar oo kabaxsan, oo ah geeska kaas oo la duubay gudaha gudaha. Dusha sare ee suunka boqoshaada dhallinyaradu waa jilicsan, yar-yar. Iyadoo da'da, miisaanku wuxuu kortaa, sameynta rucubo faro badan oo xajmi leh oo u madow dhinaca dhexe ee funniga, iyo geeska ayaa weli ah midab khafiif ah si ay u dhigmaan cidhifyada cap. Waxay ku yaalaan goobo, sida foostada saqafka guriga aqalka. Da 'weynta fungus, miisaankoodu sarreeyo ayaa kor loo qaadaa dusha sare ee daboolka. Midabka fangasku wuxuu ku kala duwanaan karaa cagaarka iftiinka ah, oo leh hooska qaxwaha madow, kudhaca shukulaatada iyo xataa madow.